Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Kala bar dadka degan UK waxay qorsheeyaan safarro dhowr ah sanadka soo socda
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka UK
Ganacsiga ayaa ka warbixinayay baahida safarka ee baahsan ee loo qabo safarka inta lagu guda jiro masiibada taasna waxaa lagu muujiyay kor u kaca qiimaha boos celinta mar kasta oo xayiraadaha la fududeeyo.
Kala bar dadka Britian waxay qorsheeyaan laba fasax ama ka badan sanadka 2022 - iyo 70% waxay qorsheynayaan inay qaataan ugu yaraan hal fasax sanadka soo socda, sida lagu sheegay cilmi baaris ay maanta (1 Noofambar) soo saartay WTM London, oo ah hormuudka dhacdada caalamiga ah ee warshadaha safarka.
Intaa waxaa dheer, afar ka mid ah 10kii macaamiishu waxay ku tala jiraan inay ku bixiyaan wax ka badan fasaxyada intii ay ku soo noqdeen 2019, ayaa daaha ka qaaday Warbixinta Warshadaha WTM.
Codbixinta 1,000 macaamiisha, oo maanta laga sii daayay WTM London, ayaa lagu ogaaday in 16% kaliya aysan qorsheyneynin inay gabi ahaanba baxaan, halka 22% ay sheegeen inay heli doonaan hal fasax sanadka 2022.
Saddex meelood meel (29%) ayaa u sheegay cod-bixiyayaasha inay qorsheeyeen dhowr fasax - oo ay ku jiraan fasaxyo gaagaaban iyo sidoo kale fasaxyo dheer - halka 11% ay sheegeen inay rajeynayaan inay qaataan saddex fasax. Ku dhawaad ​​hal 10kii (9%) ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay qaataan wax ka badan seddex fasax.
Markay timaaddo qorshayaasha kharash-bixinta fasaxyada, 43% waxay ku talo jiraan inay kharash gareeyaan in ka badan inta 2019 iyo in ka yar hal 10kiiba (9%) waxay sheegeen inay kharash gareeyaan wax ka yar miisaaniyadda 2019.
Ku dhawaad ​​lixdiiba mid (17%) ayaa sahanka u sheegay in ay "wax aad u weyn" ku bixin doonaan in ka badan 2019-marmar ah 20% ama ka badan -halka rubuc (26%) ay ku qiyaaseen in ay waxyar ka badan ku bixin doonaan - ilaa 20% in ka badan 2019 .
Saddex meelood meel ayaa sheegay inay qarashgarayn doonaan wax la mid ah sidii masiibada ka hor.
Natiijooyinka macmiisha waxaa taageeray cilmi-baaris ka mid ah warshadaha safarka ee caalamiga ah, iyadoo ku dhawaad ​​kala bar (44%) 676 shirkadood ay weydiisay WTM London waxay sheegeen in ballan-qaadkoodu uu gaari doono ama dhaafi doono heerarka la arkay 2019. Shan-meelood labo (42%) ayaa leh heerarka ballansashada sanadka soo socda ayaa wali dib u dhici doona 2019, halka 14% aysan hubin ama aysan ogeyn.
Cilmi baaristu waxay si wanaagsan u soo kabanaysaa soo kabashada warshadaha safarka ee Ingiriiska, iyadoo soo jeedinaysa inay jirto baahi xoog leh oo la doonayo in laga baxo faafitaanka kadib maadaama xannibaadaha ay fududaanayaan.
Iyada oo safarka dibedda ee 2020 iyo 2021 uu aad uga hooseeyo heerarkii Covid-XNUMX, sahamintu waxay rajo siinaysaa wakiilada, hawl-wadeennada iyo shirkadaha diyaaradaha in ballan-qaadku si dhakhso ah dib ugu soo noqon doono marka safarku fududaado.
Bishii Sebtembar, hay'adaha ganacsiga ee Airlines UK iyo Ururka Hawl-wadeennada Madaarku waxay u sheegeen Wasiirka Gaadiidka Grant Shapps in xagaaga 2021 "uu u ahaa xagaa ka xun warshadeena marka loo eego xagaaga 2020", isagoo raaciyay: "Ingiriiska waa laga tegayaa inkasta oo uu barnaamijka tallaalka adduunka garaaca. ”
Gegida dayuuradaha ee Heathrow, tusaale ahaan, wuxuu arkay nambarada rakaabka 71% hoos u dhac ku yimid Agoosto 2021 marka la barbar dhigo isla bishii ugu sarreysay xagaaga kahor masiibada.
Xuddunta London ayaa hoos uga dhacday inay ahayd garoonka ugu mashquulka badan Yurub 2019 ilaa 10aad iyadoo tartameyaashu ay si xawli badan ugu soo kabsadeen.
Intaa waxa dheer, natiijadu waxay ku celcelinaysaa tilmaamayaasha suuqa ee meelo kale lagu arkay - xagaagii, cilmi-baadhista macaamiisha ABTA waxay ogaatay in 41% ay hore u haystaan ​​fasax dibadda ah 12 bilood ee soo socda, iyo 35% ay ballansadeen fasax shisheeye xagaagan. Tirooyinkani way ka hooseeyaan sidii caadiga ahayd laakiin waxay muujinayaan sida baahida socdaalku weli tahay, in kasta oo cimilada adagi jirto.
Iyo Hays Travel, oo ah wakaaladda socdaalka ee ugu weyn Boqortooyada Midowday, ayaa soo warisay faa'iido bishii Agoosto, iyada oo ay uga mahadcelinayaan qayb ka mid ah armada maraakiibta dalxiiska ee bixiya shiraaca gudaha xagaaga agagaarka Jasiiradaha Ingiriiska.
Simon Press, Agaasimaha Bandhigga WTM ee London, ayaa yidhi: "Ganacsaduna waxay ka warbixinaysay baahida safarka ee baahsan ee loo qabo safarka inta lagu jiro masiibada taasna waxaa lagu muujiyay kor u kaca heerarka ballan-qaadka mar kasta oo xannibaadaha la fududeeyo.
"Si kastaba ha ahaatee, hubanti la'aanta iyo jaahwareerka ku saabsan sharciyada safarka ayaa hakad geliyay dad badan oo fasax-qaatayaal ah ilaa hadda.
"Iyadoo rajo badan laga qabo furitaanka xuduudaha iyo fududeynta xayiraadaha safarka, waxay u egtahay in dhammaan qorshooyinka fasaxyada muddada dheer la fulin doono, taasoo siinaysa warshadaha fursad ay ku soo kabtaan markaan ku soo laabanno qaabab safar oo caadi ah."